Le bhetri iyakwazi ukwenza ukuba ifowuni yakho isebenze ngaphezulu kweminyaka eyi-12 | Iindaba zeGajethi
Le bhetri iyakwazi ukwenza ukuba ifowuni yakho isebenze ngaphezulu kweminyaka eli-12
Enye yeenkxalabo ezinkulu zeenkampani ezinikezelweyo uphuhliso lobuchwepheshe obutsha ilele ngokuchanekileyo kwimfuno ekhulayo yokuba abasebenzisi bazive ukuba izixhobo zabo zinako ukusebenza ixesha elide. Oku kukhokelela kwiiyunivesithi ezininzi, iinkampani zamazwe aphesheya okanye oosomashishini ukuba basebenze ukuze bafumane ukuba ibhetri entsha ekwaziyo ukwenza ifowuni, umzekelo, inokusebenza ixesha elide.
Ngeli xesha ufuna ukukubonisa iprojekthi eyenziweyo UVladislav Kiselev, Isazinzulu saseUkraine, ekubonakala ukuba, ngesele sikwazile ukuphuhlisa kunye nokwakha ibhetri ekwaziyo ukusebenzisa yonke into ukusuka kwiifowuni eziphathwayo ukuya kwiimoto zombane. ngaphezulu kweminyaka eli-12 ngaphandle kokufuna ukuphinda uzitshajwe. Njengeenkcukacha, xelela ukuba ukuze kube njalo, umvelisi wayo uthathe isigqibo sokuxhobisa le bhetri nge-tritium, into ene-radioactive nangona, ngokwale nzulu-lwazi, ayinabungozi okanye iyingozi.
Sele zininzi iinkampani ezinomdla kwiibhetri ze-tritium ezivela UVladislav Kiselev.
Le yindlela le sisazinzulu saseUkraine esikwazileyo ukwenza isisombululo esinokubakho kwingxaki yobomi kwiibhetri ezihambayo. Njengeenkcukacha, ndikuxelele ukuba ulingo lwakhe lumsebenzele ukuba anikwe iSikorsky Challenge eUkraine kwaye, ukusukela oko yaboniswayo eluntwini, uyaqinisekisa ukuba uninzi loluntu kunye neenkampani, ngakumbi ezikhoyo eTurkey nase China, banxibelelane qala ukuphuhlisa kunye nokwenza iibhetri ngale teknoloji.
Ukungena kwinkcukacha ezithe kratya, njengoko uVladislav Kiselev ngokwakhe ephawule, ngokucacileyo ukwenza le bhetri isazinzulu sakhetha ukusebenzisa udaka, a Isotope enemitha ye-hydrogen apho ikwazile ukuphuhlisa iiseli ze-electrochemical, ukufezekisa oko iibhetri zifikelela kumaxesha angama-1.000 XNUMX anamandla ngakumbi ukuthelekisa kunye nezo zikhoyo kwimveliso okanye eziye zaqulunqwa. Njengoko uVladislav Kiselev eqinisekisa, iUkraine ibisebenza netritium ukusukela ngo-1930, nangona ibingekabinakho ukuyisebenzisa ukwenza amandla. Ngokwenzululwazi, ayizizo zonke izinto ezinemitha ye-radio eziyingozi ebantwini kwaye itritium yenye yazo.
Más información: kwiwoga
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » Le bhetri iyakwazi ukwenza ukuba ifowuni yakho isebenze ngaphezulu kweminyaka eli-12